Nhau - Yakachena yakasikwa zvinhu
1. Mucheka werineni
Mucheka, zvisina basa kutaura, ndiko kumhanyisa-kwembatya dzezhizha. Iyo inobvumidza iyo ganda kufema, asi zvakare inofema kwazvo haikupe iwe ziya rakazara, hapana dambudziko remagetsi, zvakare rakapfava kune iro rinobata, vanhu venyama vane hushamwari. Zvakare, jira iro pacharo rinodhura kwazvo uye rine mhando yepamusoro, izvo zvinoita kuti zvinyanye kusakara kupera muzhizha.
Rimwe rematambudziko nerineni nderekuti rinowanzo kuunyana. Kana iwe ukapfeka rokwe repamutemo rakagadzirwa nerineni yakachena, kunyangwe kana ikaainwa mangwanani, ichaunyana kana iwe ukaenda kumusangano wekambani masikati.
Unogona kufunga nezvekotoni uye hemp yakasanganiswa machira, teerera kune izvo zvinyorwa zvehemp zvakaderera pane donje, senge 60 donje +30 hemp. Chinyorwa ichi chine zvikumbiro zvakakura, saka hachiratidzike senge chakashama senge kukumbira kudiki, asi chinowedzera magadzirirwo Unogona kuiisa muwadhiropu yako mushure mekunge uchinatsa, kusiyana nemucheka wakachena, uyo unoda ironing.
2.Real sirika micheka
Hembe dzesilika yakachena yakakosha ngano yakakosha yakanaka, zvisinei, kutsungirira kwesilika yakachena hakuregi, nekuti vane yero, dhonza dambudziko resilika kuburitsa, vanoda kutenga kudzoka kuzopfeka izwi rekare panguva dzakajairika kuti vatore zvakakosha hanya mukuchengetedza yakachena. Hazvisi nyore kwazvo kuchengeta, asi nekuti inotsvedza uye inotonhorera muzhizha, vakadzi vazhinji vanozvitenga.
Kuziva zvivakwa zvayo, iwe zvakare unofanirwa kutarisisa kune dambudziko, isilika uye rineni seyakareruka kuunyana! Uye chikamu chesirika yakachena zvakare chakakosha zvakanyanya, chine silika, silika yechiJapan, silika yechiFrench mhando dzese, pakati pavo dzine silika mbiri zviri nyore kuita.
Kunge crepe inorema DE Chine, yakajairika musiriki, iyo nzvimbo inotaridzika kuve yakajeka, inoshandiswa kugadzira madhirezi, uye isiri nyore kupeta, zviri nyore kutenga pamusika.
Kune zvakare mhando yekutambanudza satin, nekuti wedzera nezve isingasvike gumi spandex, saka ive yakasununguka silika, inowanzo shandiswa kuita mahembe, isingakundike anti-kuunyana zvakare yakanyanya kunaka kuchengeta, haufanirwe kunetseka nezvekugara.
Cotton machira ane simba rekutora ziya, asi zvakare anogona kunyatso kudzivirira dikita kunhuhwirira, kupfeka muviri hauzodikitira paganda uchakura mutsvuku mapundu. Shambidza kusvika kumuchina wekuwachira kukanda, geza rakaomeswa wadhirobhu, usatarise kuti sei.